Filimka Badrinath Ki Dulhania Iyo Mudo 10-Maalmood Ah Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay - Hablaha Media Network
Filimka Badrinath Ki Dulhania Iyo Mudo 10-Maalmood Ah Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay
HMN:- Varun Dhawan iyo Alia Bhatt filimkooda Badrinath Ki Dulhania ayaa sedexd darajo isku darsaday oo ay Hit-ka ugu weyn, Super Hit-ka ugu horeeyay iyo filimka todobaadka labaad sedexda maalmood ee ugu horeesay lacagaha ugu badan sanadkaan 2017 soo xareeyo.
Badrinath Ki Dulhania wuxuu dhaafay filimka Jolly LLB 2 oo todobaadkiisa labaad sedexda maalmood ee ugu horeesay kaaney 15.75 Crore halka BKD uu isla waqtigaas kusoo xareeyay 17 Crore.
Mudo 10-maalmood ah filimka Badrinath Ki Dulhania wuxuu gudaha Hindiya kasoo xareeyay 88.75 Crore (Trade Figure) sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday.
Waa hubaal Badrinath Ki Dulhania wuxuu noqon doonaa filimka labaad ee sandkaan lacagaha ugu badan soo xareeyay asigoo Jolly LLB 2 dhaafi doono balse Raees ma gaari karo.
Guusha lixaada leh ee Badrinath Ki Dulhania gaaray waxaa ugu wacan miisaaniyada lagu qarash gareeyay oo ka yar filimada waa weyn ee sanadkaan la daawaday.
BKD qarashaadkiisa wuxuu 50% ka yar yahay filimada Kaabil iyo Jolly LLB 2 lacagaha lagu qarash gareeyay sidoo kalena 65% wuxuu ka yar yahay qarsshaadka Raees la galiyay.
Hadii aan sii fasirno qoraalka sare Boxoffice India iska leedahay waxaa loola jeedaa in Kaabil lagu qarash gareeyay 89 Crore, Jolly LLB 2 lagu qarash gareeyay 83 Crore halka Raees lagu qarash gareeyay 127 Crore waxaana sedexdaan filim lagu daray qiimaha Hrithik, Akshay iyo SRK filimada ku sameeyaan (Market Value) madaama aysan lacago toos ah ku qaadanin sameynta filimadooda.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Badrinath Ki Dulhania iyo lacagaha uu soo xareeyay 10-ka maalmood ee ugu horeyso:
Todobaadka kowaad – 71.77 Crore
Jimco labaad – 4 Crore
Sabtiga labaad – 5.75 Crore
Axada labaad – 7.25 Crore
Todobaadka labaad – 17 Crore (Mudo sedex maalmood)